သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ဂလိုဘယ်စီးပွားပျက်ပြဿနာနှင့် မြန်မာပြည်
စက်တင်ဘာလလယ်လောက်က စပြီး ပိုပြီးကျယ်လောင်စွာ ကြားလာခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ.စီးပွားရေး အက်ကွဲသံ... အကုန်လုံးက ရင်တမမနဲ့.. စိုးရိမ်ပူပန်ရင်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လက်တွေ ကမ်းလိုက် လက်တွေ မြှောက်လိုက်နဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ်ကြီး ဆိုက်ရောက်မလာအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေကြတာတွေ မြင်နေ.. ကြားနေ ရပါတယ်။
ဒီနေ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းမ်း ဂျာနယ်မှာလည်း မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး အဖြစ် အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြပေးလို့ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးပါပဲ.. ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ သူတွေကတော့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခ အငြိမ်းစား ဆရာမကြီး ဒေါ်လှမြင့်၊ UMFCCI ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးမြတ်သင်းအောင်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ ဦးဝင့်ကျော်၊ ဦးဟန်ထွန်း (အခွန်) နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ပါ ပါပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရေးရဲ. စီးပွားရေးဂယက်ဟာ အာရှ စီးပွားရေး ထိပ်သီးတွေ ဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်း နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများကို ကူးစက်ရိုက်ခတ်လျှက် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ ရိုက်ခတ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့အတွက်တော့ အထူး စိုးရိမ်ရဖို့ မရှိပါဘူးလို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
“ကမ္ဘာဟာ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက် ဒီအကြပ်အတည်းက အားလုံးနဲ့ ဆိုင်သလို ဖြစ်နေပါတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတော့မားကက် မရှိဘူး၊ ဘဏ်တွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားနဲ့ ချိတ်ဆက် လုပ်ထားတာ မရှိတော့ ဒီအကျပ်အတည်းကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ရိုက်အကျိုး သက်ရောက်မှုတော့မရှိနိုင်ဘူး” လို့ ဦးဝင်းကျော် (ဘဏ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ) က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်အနေနဲ့တော့ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမယ့် ဆက်စပ်နေတဲ့ ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ နှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ပို့ကုန်တွေကို မြန်မြန်ထုတ်ရောင်းပြီး cashflow မှီအောင် လုပ်ရမှာပါ.. cashflow နှေးရင်တော့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာပါ ကျဆင်းလာပါမယ်..။ လောလောဆယ် ပို.ကုန် ရေထွက်ပစ္စည်းအချို. ၂၀ ရာခိုင်နူန်းကျသွားတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း က ဦးညိုမင်းပြောတာလည်း ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ထိခတ်လာမှာက အခုဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေး Crisis ကို တိုက်ရိုက်ထိမှာ မဟုတ်ဘဲ ဂယက်လောက်သာ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆ ထားကြပါတယ်။
သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေ တချို.မှာ အနည်းငယ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်လို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အနည်းငယ် ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရောင်းအားကျဆင်းပြီး ပိတ်သွားရတဲ့ ကုမ္ပဏီ စက်ရုံ တချို.တော့ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း Trading သမားတွေကတော့ လက်ရှိကုန်ပစ္စည်းမျိုး၊ နိုင်ငံတကာမှာ ဈေးကျလို့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လျှော့ရောင်းရပါလိမ့်မယ်။
တော်သေးလို့ပေါ့..။ မြန်မာပြည်ကြီးက ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေရှင်းထဲ မ၀င်ခဲ့တာ...။ တော်သေးတာပေါ့.. မြန်မာပြည်မှာ စတော့ခ်တွေ ရှယ်ယာတွေ ပေးမကစားထားတာ...။တော်သေးလို့ပေါ့... သူများဘဏ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မလုပ်ကိုင်ခဲ့တာ...။ တော်သေးလို့ပေါ့.. နိုင်ငံတကာ Money exchange တွေမှာ မြန်မာ ကျပ်ငွေတွေ လဲလှယ်နုန်းတွေ ဖော်ပြမခံခဲ့ရတာ.... တော်သေးလို့ပေါ့... တို့တွေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့တာ...
သူဌေး သဘောင်္မှောက်တာနဲ့ သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တာ.. ဘယ်သူက ဆုံးရှုံးမှုပိုကြီးပါသလဲ....။ ဘာပဲပြောပြော ကျမတို့တိုင်းပြည်ကတော့ မဗေဒါ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပါပဲ... ။
စာညွှန်း။ အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၄၁) အောက်တိုဘာ ၂၃-၂၉၊ ၂၀၀၈. ရန်ကုန်တိုင်းမ် မှ “ဂလိုဘယ်စီးပွားပျက်ပြဿနာ မြန်မာကို မထိခိုက်ပါ” perstpective ariticle..
Posted by tg.nwai at 12:41:00 PM
Lables, ဖတ်မိသည်နှင့် ဆက်စပ်၍...။
မဗေဒါ အံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပါပဲ... ။
မွန်ရေ.. အားတင်းထားနော်.. u r not alone.
သူငယ်ချင်းရေ.. မဗေဒါ အံကိုခဲ နေတာ ဆရာဇော်ဂျီတို.ခေတ်ကတည်းက ကွဲ.။ ခုမှ တို.တိုင်းပြည်က လူတွေ မွဲတယ်လို. ပြောတာတော့ မခံနိုင်ပါဘူးနော်.. :(
ကိုယ့်တိုင်းပြည်က မွဲလို့ပဲ သူများဆီမှာ အလုပ်သမားလာလုပ်နေရတာပေါ့.. ဟွန့်